တစ်ဦးကား Mae Sot ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Mae Sot ကားတစ်စီးငှားရမ်း Mae Sot
မော်တော်ကားငှားရမ်း Mae Sot
တစ်ဦးကားကိုငှား Mae Sot
မဲဆောက် thewest မှမြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်စပ်မျှဝေအနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက်မြို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုတက်ကြွထိုင်းနှင့်မြန်မာနှစ်ဦးစလုံး Thailandwith ၏မြေတပြင်လုံးအတွက်အများဆုံးယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမြို့တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့အချို့ 590 ကီလိုမီတာ fromBangkok မှာထိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာအဖြစ် ပို. ပို. သိသာဖြစ်လာနေသည်။ ဒါဟာကျောက်စိမ်းနှင့်ကျောက်မျက်များအတွက် shoppingparadise နှင့်စည်ပင်သာယာစျေးကွက်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်, သင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအဓိပ်ပာယျ၏ထူးခြားသောပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးစုဆောင်းမှု willenjoy ။ တောင်ကြီးတောင်ငယ်များ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းအားဖြင့် tingled ကျောရိုးဖြစ် Getready အနီးအနား asthe အဖြစ်ကောင်းစွာကျော်ကြားသီ Lo စုရေတံခွန်များနေကြပါတယ်။ ဧည့်သည်များမှာလည်း highlyrevered Phra Jaow Tan က Jai နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Photikhun ဗိမာနျတျောသို့သွားရောက်ရ။ theincredible တောတွင်းခရီးစဉ်, ဆင်စီး, ရေအပျော်ဖောင်စီးခြင်းဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ ?, youwill လည်းဝိညာဉ်တော်ကြယ်ပွင့်ကခုန်ပွဲတော်, သူဌေးဒေသခံယဉ်ကျေးမှု traditionshowcasing တစ်ဦးလူကြိုက်များအတွက်လုပ်ကြဖို့ကိုရယူပါ။
မဲဆောက်လေဆိပ်မြို့အလယ်ဗဟိုကနေဖွင့်3ကီလိုမီတာမှာတည်ရှိပါတယ်။ Nok Airoperates မဲဆောက်နှင့်ဘန်ကောက်အကြားသုံးနေ့စဉ်ပျံသန်းမှု။ သင်တို့သည်လည်းဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ကားဖြင့်ခရီးသွားလာရွေးချယ်နိုင်သည်။ Gettingaround မြို့တော်တော်လေးရိုးရှင်းပေမယ့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, နှစ်ဦးစလုံးဒေသခံတွေ andtourists ကားတစ်စီးနှင့်လေးဘီး drives တွေကိုငှားဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။ တစ်ဦး personalcar နှင့်အတူ, သငျသညျနှင့် thetown ထဲကနှစ်ဦးစလုံးလွတ်လပ်မှုနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ခရုဇ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ လောလောဆယ်အကောင်းဆုံး option ကိုမဲဆောက်ရှိဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းအားလုံး themajor မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ငယ်များတွင်သာရရှိနိုင်သောငှားတဲ့ကားကလပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကားမဲဆောက်ကလပ်ခြော yourtravel အဖြစ်ကောင်းစွာအရသာအဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူ premiumservices ကမ်းလှမ်းငှားရမ်း။ မော်တော်ကားများ၏အကွာအဝေး 4x4s, SUVs, Sedan, Converter နှင့်ပိုပြီးပါဝင်သည်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရယူရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရိုး visitingthe မဲဆောက်ငှားတဲ့ကားကလပ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုပုံ youcan ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်အပိုင်းကိုနှိပ်ခြင်းအားအပေါ်သို့, သင်ရရှိလာတဲ့ Drop-down menu.Be သေချာ input ကိုရန်သင့်လျော်သောက start ကနေသင့်ရဲ့ကောက်တည်နေရာကိုရွေးပါနှင့် rightbilling ရမှသကဲ့သို့ရက်စွဲများပြန်လာသတိပေးခံရ willbe ။ ကားတစ်စီးငှားရမ်းမဲဆောက်နှင့်အတူတစ်ဘွတ်ကင်ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုပိုမိုဖွင့်ထားအောင်, redeemingyour ပရိုမိုကုဒ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုစျေးနှုန်းတွေလျှော့ရလိမ့်မယ်။
· Wat ဒွန်ချိုင်
· Landfair Shopping Mall
· Wat ဒွန် Kaeo
· Centara မဲဆောက် Hill Resort
အဆိုပါငှားတဲ့ကားကမဲဆောက်ကလပ်ဖောက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကောင်းသောအခြေအနေများအတွက်, ရှိသမျှ vehiclesserviced နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ငှား acar features အသစ်တွေလည်းပါဝင်အသုံးပြုခြင်း၏အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို;